Mursal iyo laftaGareen Oo Balanqaadyo Been ah ka Sameeyey Siideyntii Muqtaar Rooboob:-(Akhriso) – hareerley
Mursal iyo laftaGareen Oo Balanqaadyo Been ah ka Sameeyey Siideyntii Muqtaar Rooboob:-(Akhriso)
Maxamed Mursal iyo laftgareen ayaa Shacabka K/Galbeed u balanqaadey in ay kursiga isaga degi doonaan haddii ay soo deyn waayaan Muqtaar Rooboob ka dib markii dowlada Federalka ay ku xirtey si Sharcidaro ah.
Muqtaar Oo ahaa Musharax u taagnaa Xilka hogaamiye Goboleedka K/Galbeed ayaa Xabsiga la dhigey iyadoo ilaa iyo haatan aanan wax maxkamad ah aanan la soo taagin taasi oo markaasi meel kadhac ku ah nidaamka Garsoor ee markaasi Soomaliya ka jira.
Hadaba Madaxdan Ayaan ilaa iyo haatan kursiga isaga degin iyagoo markaasi ay ka aheyd maaweelo oo ay markaasi maaweelinayeen Odayaasha dhaqanka iyo bulshada K/Galbeed.
Maamulka N&N Ee ka taliya Xukuumada Soomaliya ayaa ah kuwo aanan ka xishoon waxyaalaha markaasi aysan ka dhex arkin danahooda qaaska ah.
Muqtaar waa muwaadin Soomaali ah lehna xuquuq ilaa iyo haatana aanan la soo taagin wax maxkamad ah Eedeyna aysan u heyn kooxda N&N iyo hey’adaha Cadaalada Oo ah iyagu markaasi kuwa Cambaari ku taalo Oo aanan muwaadinimo Graneyn iyo wax Sharcigu dhigaayo toona.
Ugu danbeyna Muqtaar Rooboob ayaa ah Shaqsi Soomaliyeed Oo si sharcidaro ah ugu Xeran Shaqsiyaad Awood ku leh Xukuumada N&N.
W/Q:- Xasan Cusmaan
Hassan Osmaan Home facebook
← Hogaamiyaha Hir-Shabeelle oo xilka qaadis iyo Magacaabis Sameeyay
Sudan protests: Army fires at Khartoum rally, killing two →